Ogeysiiska Sharciga, Shirkadaha Ogeysiiska Sharciga, Soosaarayaasha Ogeysiiska Sharciga, Dhoofinta Ogeysiiska Sharciga
Ku soo dhawow degelkan. Websaydhkani waa degel ganacsi ganacsi oo xirfad leh oo ay maamusho shirkadeena. Si loo jaangooyo maareynta websaydhka loona ilaaliyo xuquuqda sharciga ee websaydhka iyo sidoo kale milkiilayaasha xuquuqda daabacaadda ee qaanuunka waafaqsan, shirkaddu waxay halkan ku samaynaysaa bayaannada sharci ee soo socda. Shuruudaha iyo shuruudaha lagu xusay bayaankan sharciyeed waxay khuseeyaan dhammaan dadka ama hay'adaha galaya iyo adeegsanaya shabakadan.
Websaydhkani waa degel ganacsi oo xirfad leh oo loogu talagalay warshadaha dawooyinka. Qof kasta ama hay'ad kasta oo booqanaysa ama adeegsanaysa degelkan waa inay u hoggaansamaan sharciyada iyo xeerarka khuseeya, waana inaysan ku lug yeelan howlo sharci-darro ah iyagoo gacan ka helaya awoodda isgaarsiinta ee degelkan.
2, Dhammaan waxyaabaha ku jira degelkani waa inay sifiican ugu adeegaan dhagaystayaasha. Boggan ma damaanad qaadayo in dhammaan macluumaadka, qoraalka, sawirada, xiriiriyeyaasha iyo saxsanaanta kale ee buuxda iyo dhammaystirka mashruuca. Macluumaadka waxaa loogu talagalay oo kaliya booqdayaasha inay adeegsadaan tixraaca sababtoo ah adeegsiga mareegtan waxyaabaha ku jira boggan isla markaana cawaaqibka la xiriira uusan qaban doonin wax ganacsi iyo mas'uuliyad sharci ah.
3, Dhammaan websaydhada ku xiran websaydhkan, waxyaabaha ku jira iyo xuquuqda lahaanshaha waxay mas'uul ka noqon doonaan bixiyeyaasha iyo milkiilayaasha u dhigma. Intaas waxaa sii dheer, websaydhku ma qaadi doono wax masuuliyad ganacsi ama sharci ah oo toos ah ama aan toos ahayn wixii nuxur ah, qaab ama dabeecad ah.
4. Dhammaan dadka wax ku biiriya websaydhka waa inay damaanad qaadaan asalka iyo xaqiiqada qoraalka. Cawaaqib kasta oo sharci ah oo ay keento xatooyo ama khayaano waxaa qaadaya kuwa wax ku darsaday, degelkuna wuxuu xaq u leeyahay inuu ka soo kabto Qoraallada la aqbalay, degelku wuxuu ku siin doonaa tabarucayaasha hab waafaqsan habka lacag bixinta.
5. Xuquuqda qoraallada, qalabka iyo sawirrada la xiriira ee lagu soo saaro degelkan waxaa iska leh qoraha asalka ah ama daabacaadda asalka ah. Iyadoo aan la helin ogolaanshaha milkiilaha xuquuqda daabacaadda, ma jiro urur ama shaqsiyaad u adeegsan kara qodobbada ujeedo ganacsi. Websaydhku wuxuu ilaaliyaa xuquuqda khuseeya ee milkiilayaasha xuquuqda lahaanshaha si waafaqsan sharciga. Kuwa aan hubin milkiilayaasha xuquuqda daabacaadda markay daabacayaan ama isticmaalayaan, waxay u soo gudbin karaan shahaadada aqoonsiga ee milkiilayaasha xuquuqda daabacaadda iyo waxyaabo kale oo sharxi kara milkiilayaasha xuquuqda lahaanshaha bogga. Websaydhku wuxuu bixin doonaa abaalmarin sida ku xusan qodobbada ku habboon.